Scup: Yemagariro Midhiya Kuongorora, Kuongorora uye Kubata | Martech Zone
Mugovera, Nyamavhuvhu 17, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Scup akadaro scoop - yakatanga muBrazil uye ikozvino inotsigira Chirungu, Portuguese uye Spanish. Kune emabhizinesi nema agency, Scup ine ese akakosha maficha eiyo chaiyo-nguva yemagariro midhiya yekutarisa, kutsikisa uye kuongorora chikuva.
Scup inotungamira yekudyidzana enhau yekutarisa chishandiso uye inoshandiswa neanopfuura makumi maviri nemaviri zviuru zvevashandi. Scup inobatsira mamaneja enhau enhau simba kuburikidza nebasa ravo kubva pakutumira kune kuongorora, zvakanyanya kuwedzera kugona kwavo.
Zvimiro zveScap uye Zvakanakira
Tarisa magariro enhau - Scup inoshanda maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pasvondo, ichitarisa vezvenhau otomatiki kuitira kuti usazodaro. Nyora mazwi akakosha uye uone zviri kutaurwa pamusoro pechiratidzo chako uye vakwikwidzi vako paTwitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, Vimeo, Flickr, Orkut, Instagram, Tumblr, Slideshare, Foursquare, Google, Google+, Yahoo!, Mablog, nhau, RSS feeds, mawebhusaiti uye nezvimwe zvakawanda zvemagariro. Ronga zvinhu zvakaunganidzwa se zvakanaka, kunaka uye pakati nepakati zvinoenderana nekutarisa kwako. Wedzera ma tag kuronga zvinhu zvako.
Ziva - Ziva ndiani ari kutaura pamusoro pechiratidzo chako. Izvo zvinokwanisika kuti utore vanhu vane hunyanzvi uye avo vari kutaura pamusoro pechiratidzo chako zvakanyanya, maminetsi mashoma mushure mekugadzira kutsvaga kwako. Pakarepo gadzira nhaurirano dzekukurukurirana papuratifomu. Scup matanda ehurukuro nekudyidzana, kuti iwe ugone kungotarisa pane izvo nyaya uye usatombonetseke nezvekuchengeta kuti ndiani ndiani.
Publish - Tumira pane ako masocial network uchishandisa Scup. Nyoresa ako Twitter, Facebook uye Youtube ma profiles uye tumira maTweets, madziro machira uye mavhidhiyo ese pasina kusiya Scup. Kutungamira kwaScup kunosanganisira akati wandei mvumo-yakavakirwa mazinga. Centralization inobvumira chete mutariri wekutarisa kuti agadzirise profiles, asi inopa vamwe vashandi kugona kutumira uye kupindura. Izvi zvinoreva, mubvunzo "pasocial account password?" ichave ingori ndangariro diki.
Reporting - Gadzira mishumo uye ongorora mhedzisiro. Tevedza kufambira mberi kwekutarisa kwako kuburikidza nemifananidzo yakajeka inosvinwa neawa, zuva, vhiki, mwedzi kana gore. Tarisa pane ruzivo runodiwa kuti uongorore zano rako mumasocial network. Uye kana iwe uchida kusvibisa maoko ako uye kushanda nedata mbishi, iro harisi dambudziko. Scup inoburitsa zvinhu zvese kubva pakuongorora kwako zvakananga kuExcel.
Mitengo yeScup inokwikwidza neakanyanya kufarirwa enhau enhau muindasitiri; muchokwadi, iwe unogona kusevha mashoma mazana emari pamwedzi kana uchienzaniswa neyako yazvino mhinduro.
Tags: chaiyo-nguva yekutarisascupevanhu vezvenhaumagariro enhausocial media ongororomagariro enhaupasocial media kutsikisamagariro enhau